आर्थिक मारमा शहरका गरिब बालबालिका – Loktantra Post Loktantra Post
आर्थिक मारमा शहरका गरिब बालबालिका
हजुर तरकारी लिनोहोस् है, ताजा तरकारी ।
लौ हजुर आयो है आयो ताजा माछा, जिउँदो माछा ।।
हजुर जुत्ता चप्पल, जामा, गन्जी, सर्ट लिनुहोस् है, सस्तोमा ।।।
आजकल विराटनगर बजारमा स–साना बालबालिकाहरुले सकिनसकी रिक्सा कुदाउँदै शहरका टोल–टोलमा चिच्चाउँदै घुमिरहेका हुन्छन् । कोहि आफ्ना अभिभावकको सहयोग पाइरहेका हुन्छन् भने धेरैचाँहि दाजुवहिनी, दिदीबहिनी वा दाजुभाई मिलेर सकिनसकी पालोपालो रिक्सा कुदाउँदै टोलमा व्यापार गर्न घुमिरहेका हुन्छन् ।
६ महिनादेखि निरन्तर यसरी असिनपसिन हुँदै टोल–टोल घुम्नु उनीहरुको रहर हैन बाध्यता हो । शहरी क्षेत्रमा बस्ने गरिब परिवारका बालबालिकालहरु कोरोना महामारीले गर्दा पढन मात्र बञ्चीत भएका छैनन् परिवारमा साँझ विहान के खाउँ, कसरी खाउँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन । उनीहरुका अभिभावकले गर्दै आएको मजदुरी पेशा लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा धरासायी भएको छ ।
रिक्सा, सिटी, अटो, ठेला केही पनि चलेका छैनन् । बजार चलायमान नहुँदा उनीहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । तरकारी, फलफुल र साना मनहारीको पसल गर्नेहरु समेत प्रभावित भएका छन । जसको मार शहरी गरिब बालबालिकाहरुमा प्रत्यक्ष परेको छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा खुला आकाश मन पराउने बालबालिकाहरु शैक्षिक संस्था नखुलेका कारण घरमै सीमित छन । ग्रामिण क्षेत्रका वालवालिकाहरु त आआफ्नो गच्छे अनुसारको कृषिकर्ममा भुलिरहेका छन । धेरैले बिद्यालय नलागेपनि आफ्ना अभिभावकलाई घरको काममा सहयोग गरिरहेका छन । पारिवारिक र सामाजिक वातावरणमा घुलमिल भईरहेका छन ।
तर शहरी गरिब बालबालिकाहरु कोभिडका कारण प्रत्यक्ष त्रासमा परेका छन । शहरी क्षेत्रका लाखौं गरिब बालबालिकाहरु सृजनशिलता विहीन भएका छ्न । उनीहरु कोहि आमाबुबालाई तरकारी र फलफुल बिक्री गर्न सघाउँदै छन् ।
तर कोभिडमा व्यापार पनि खुम्चिएकोले धेरै वालवालिकाहरु कैदी झैँ बस्न बाध्य छन । स्कुल जान, पढ्न, खेल्न, साथीभाइसँग रमाइलो गर्न रुचाउने नानीहरुलाई कोरोना महामारीले मनावैज्ञानिक त्रास थपेको छ ।
अर्कोतिर महामारीमा बाहिर हिँडडुल गर्न नपाइने, आमाबाबुले गर्दै आएको बन्दव्यापार पुर्ण प्रभावित हुँदा आर्थिक अवस्था दहनिय बनेकोले बालबालिकाहरुलाई झन पीडा थपिएको छ ।
कतिपयको घरमा कलह सृजना हुँदा वालवालिकाहरु पनि घरेलु हिंसाको मारमा परेका छन । कोरोना महामारी लामो समयसम्म चलेको र अझै चल्ने भएकोले शहरी क्षेत्रका गरिब बालबालिकाहरु धेरै त्रास र आर्थिक मारमा पर्ने निश्चित छ ।
अझै अभिभावकको आम्दानी समेत गुमेकोले अब उनीहरुको पढाइ पनि संकटमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । धेरैपछि बिद्यालय खुलेपनि सबै अभिभावकले बालवालिकाहरुलाई पढन पढाउने अवस्था हुँदैन । निजी स्कुलमा पढाउनेहरुले त पक्कै छोराछोरी स्कुल पढाउन चुनौती छ ।
हो, कोरोनाले सबै उमेर समुह र वर्गका मानिसलाई उत्तिकै तर्साएको छ । तर अझ बढी कोरोनाको चपेटामा निम्न वर्ग छन । जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरुका सन्तान अर्थात वालवालिकाहरुमा पनि परेको छ ।
कतिपय बालबालिकाको त बाबुआमा दुबै संक्रमित भएर आइसोलेसनमा लगिएको छ । ती बालबालिका कसरी बसेका होलान, के खाँदै होलान ? यस्तो परिवारको बालबालिकाको पीडा कति कहाली लाग्दो होला ? धेरै बिरामी भएका बालबालिकाले पनि भनेजस्तो उपचार पाएका छैनन् ।
यसवारे स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार कसैले खोजी निधि गरेको पाईदैन । गरिब भएकोले उनीहरुलाई टोल समाजका छिमेकीहरुले पनि वास्ता गर्दैनन । जसले गर्दा बालबालिकाहरु भोकभोकै मात्र नभएर आफुलाई हिन्ताबोध महसुस गर्न बाध्य भएका छन । जसको असर उनीहरुको भोलि पठनपाठनमा मात्र नभएर निर्णय क्षमतामा पनि पर्नेछ ।
हुने खाने परिवारका बालबालिकालाई लकडाउन ‘एक चाड झैं’ भएको होला । उनीहरु घरमै विभिन्न सुविधा उपभोग गरिरहेका होलान । अनलाइन कक्षा पनि लिइरहेका होलान । तर हुँदा खाने वर्गलाई चाँही कोरोनाले जिउन न मर्नु बनाएको छ । कोरोनाले गर्दा नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै दम्पतीले जागिर गुमाएका छन । जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परेको छ ।
छोराछोरीको उज्ज्वल भविश्यका निम्ती जोहो गरेर राखेको पैसा लकडाउनको शुरुवाती दिनमै सकिएको छ । तर कोरोना संक्रमण अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । जसले परिवारको गुजारा चलाउन झन झन संकट थपिदैछ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने बाबुआमा काम विहिन भएर खाली हात घरमै बस्न बाध्य छन ।
केहिले विरत्तिएर आत्महत्या पनि गर्न थालिसकेका छन । धेरै बालबालिकाहरु आधा पेट खाएर जीवन गुजारी रहेका छन । जसले गर्दा बालबालिकाहरुमा कुपोषणको जोखिम पनि थपिएको छ ।
सन्दर्भ ः ५५औँ राष्ट्रिय वालअधिकार दिवस
राष्ट्रिय बाल दिवस प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमका साथ भव्यरुपमा मनाउने गरिन्थ्यो । तर कोरोनाका कारण यसवर्ष वालदिवस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । विद्यालयहरु बन्द भएकोले कुनै औपचारिक कार्यक्रमहरु भएका छैनन् । कोभिडकै त्रासले भविश्यका आश लाग्दा कलिला मुनाहरुले निरासाको घेराभित्र निस्सासिनु परेको अवस्था छ ।
सबै सुबिधाले सम्पन्न परिवारका बालबालिकाको लागि प्रत्येक दिन बाल दिवस हुने गरेको छ । तर गरिबीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको लागि न सरकारको तर्फबाट न कुनै पहल भयो न कुनै नीतिको निर्माण भएको छ । सडकमा रहेका र पहुँच नभएका बालबालिकाका लागि हरेक वर्ष मनाइने बाल दिवस शव्द र नारामा मात्र सीमित भएको छ । झन यसपालि त कोभिडले गर्दा उनीहरुसम्म नारा पनि पुग्ने अवस्था छैन ।
कोरोना महामारीका बेला भीख मागेर आफ्नो दैनिकी चलाउने सडक बालबालिकाको अवस्था झन कहालीलाग्दो छ । आफुले आफुलाई बालअधिकारकर्मी भन्दै खोक्नेहरु खै यो महामारीका बेला कुन दुलो भित्र पसे ?
आर्कषक नारा बनाएर अनेकौं प्रतिबद्धता गरेर बालअधिकारको संरक्षण गर्छु भन्ने अधिकारकर्मी, सरकार महामारीको यो कठिन समयमा चाहिँ खै कता लुके, के बालअधिकार शब्द र नाराको लागि मात्रै हो ?
हाल महामारीको अवस्थामा ४४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका बालबालिकाका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु, विद्यालय र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले उनीहरुको बचाऊ, संरक्षण, विकास र सहभागिताका सवालमा गरेका कार्यहरुको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
विशेषगरी शहरी क्षेत्रका गरिब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिहरुको मनौवैज्ञानिक समस्या, उद्दार र पुनस्र्थापनामा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।
बालअधिकारकर्मी बासु अधिकारी कोभिडलाई त्रासका रुपमा मात्र नभएर व्यस्त जीवनशैलीका कारण बालबालिकासँग बढेको पारिवारिक दुरि घटाउने अवसरको रुपमा लिनु पर्ने बताउछन् । हुन पनि दैनिक हतारमा बिद्यालय जानुपर्ने, धेरै पढनु पर्ने, गृहकार्य गर्नुपर्ने, भनेको बेला साथीभाई भेटन र रहर लागे अनुसार खेल्न पनि नपाइने, व्यस्त र दवाबमुलक जीवन अहिले छैन । यसैले बालबालिकासँग बसेर परिवार इष्टमित्रका विषयमा कुरा गर्ने, पुराना तस्वीर देखाएर आफन्त चिनाउने भुमिका पाका सदस्यले निभाउनुपर्छ ।
यसैगरी करेसावारीमा काम गर्नु, बोट विरुवा चिनाउने, समान्य खनजोत गर्ने काममा पनि बालबालिकालाई लगाउन सकिन्छ । यसबाहेक आफ्नो रितिरिवाज अनुसारको संस्कार बुझाउने र वालवालिकालाई समाजिक परम्परा बुझ्ने काम पनि गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभएर परिवारका सदस्यमा भएको गीत गाउने खेल्ने वा अन्य शीपहरु बालवालिकाहरुलाई सिकाउन सकिन्छ ।
साथै बालबालिकाहरुको रुची अनुसार शीप विकासमा सहयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो चित्र बनाउने, गीत कविता लेख्ने गाउने, विभिन्न यन्त्रहरु बनाउने रुची बालवालिकाहरुमा हुन्छ । तर शहरी गरिब बालकालिकाहरुले यो सुबिधाको अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन् । किनभने उनीहरु महामारीको त्राससँगै झन गरिबीको दबाबमा परिरहेका हुन्छन ।
सन २०१९ डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले ठूलोसानो, धनीगरिब नभनिकन संसारका सबै देशहरुको सातो लिइरहेको छ । आधुनिक स्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञानमा पोख्त मानिने देशहरुको प्रयासले पनि अझैसम्म समाधानका लागि केही परिणाम दिन सकेको छैन । संसारका खासगरी शक्तिशाली देशका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, विद्वान, धनाढ्य व्यापारीहरुलाई कोरोना भाइरस चुनौती भएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अवस्था पनि ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ भयावह बनिरहेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणले ६ सय बढीको मृत्यु भईसकेको छ । पचास हजार भन्दाबढी मानिसहरु संक्रमित भईसकेका छन । र, दिनानुदिन थप नँया संक्रमितहरु थपिइरहेका छन ।
६ महिनादेखि देशका विभिन्न ठाँउहरुमा लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी छ । कलकारखाना, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, शैक्षिक संस्था ठप्प छ्न । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी पनि गुमेको छ ।
लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था बन्द भएका कारण भविश्यका कर्णधार मानिने कयौं बालबालिकाको वर्तामान नै अन्योलमा छ । त्यसमा पनि शहरी गरिब वालवालिकाहरु झन धेरै समस्यामा छन । त्यसैले उनीहरुको अधिकारका लागि सरकारी, गैरसरकारी सबै क्षेत्रले हातेमालो गरौँ ।
(लेखक ः आशिका लम्साल मोरङ क्याम्पस विराटनगरमा पत्रकारिता विषयमा स्नातक तह तेस्रो बर्षमा अध्ययन गर्दैछिन्)